XUKUUMADA OO SHAACA KA QAADAY IN LACAGTA GURYAHA LA IIBIYEY LAGU DHISAAYO STATE HOUSE-KA | Toggaherer's Weblog
WASIIRKA QORSHAYNTA S/L CALI SANYARE & WAFTI UU HORAMINAYO OO JABUUTI U KICTIMAY
Wasiirka Wasaarada Hawlaha guud ee Somaliland mudane Siciid Sulub Maxamed ayaa shaaca ka qaaday marki ugu horaysay in guriga State Hous-ka ee xaafadda shacabka lagu hagaajin doono lacagta ay dawladu ka qaaday ganacsatada iibsatay dhulka dawlada, gurigaas oo lagu wado inuu noqdo xarunta Madaxtooyada ee cusub, haatana ay degan yihiin dad qaxoonti ahi.
Wasiirka hawlaha guud waxa uu sidaa ku sheegay waraysi kooban oo uu siiyay shalay wariye Maxamed Cabdi Ilig oo ka tirsan Horn Cable Tv, waxaanu intaa ku daray in Madaxwaynuhu bixiyay dhulkaasi kadib qiimayn ay sameeyeen wasaarada Hawlaha guud oo ku ogaadeen in loo baahan yahay in danta guud ee ay ka dhisnaayeen goobaha la iibiyay magaalada uga bilic iyo quruxba badan yihiin dhismayaasha ay ka dhisayaan ganacsatadu.
Isaga oo hadalkiisa sii watana waxa uu sheegay in lacagata lagu iibiyay dhulkaasi lagala xisaabtami doono cida lacagta masuulka uga ah dawlada isla markaana ay lacagtani ku dhacayso khasnada dawlada.
Siciid Sulub waxa uu ku eedyey niman uu ku tilmaamay masuuliyiin inay lacag u adeegsadeen banaanbixii iyo rabshadii ay sameeyeen ardayda dhigata dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Bashiir kaasi oo dhul uu leeyahay ay iibisay dawladu.
Dhinaca kalena waxa uu deedafeeyay inay jirto in xukuumadu ku jirto lacag urursi dhaqaale, kaambayna ay ku galayso lacagta iibka guryahaa, taasoo mucaaradka iyo dadkuba ku eedaynayaan, waxaanu taasi ku tilmaamay mid aan jirin.
Wasiirka Hawlaha Guud waxa uu cadeeyay inay dawladu iibisay dhulkani halka wasiirka Maaliyadu hore u sheegay inay dawladu bilaash u bixisay dhulkaasi. waxaanu cadeeyay mudane Siciid Sulub Maxamed in dhulka la iibiyay yahay oo kaliya 4 qabcadood wax kale oo la iibiyayna aanay jirin.
Waa markii ugu horaysay ee xukuumada Somaliland si toosa uga hadasho dhulka danta guud ee ay iibsanayaan ganacsatada Somaliland oo baryahan danbe taratan ugu jira sidii ay ula wareegi lahaayeen goobaha ay dawlada Somaliland maamusho eedanta guud ee umada kawada dhaxaysa ah.Waaheen